စာနယ်ဇင်း 2016 အတွက် TRF | အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှသတင်းစာများနှင့်အွန်လိုင်း
ပင်မစာမျက်နှာ အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2016 အတွက် TRF
မီဒီယာအဆိုပါဆုကြေး Foundation မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်: အညစ်ညမ်းအသိအမြင်အတန်း; အားလုံးကျောင်းများတွင်ထိရောက်သော, ဦးနှောက်-based လိင်ပညာရေးများအတွက်ခေါ်ဆိုခ; ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ငါတို့၏ကိုယ်အလှူငွေအပေါ် NHS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျလိုအပျ သုတေသနလုပ်ငန်း porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်စာနယ်ဇင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအချို့ကိုဖော်ပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆။ Mary Sharpe သည်ဗြိတိန်၌လိင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ဒေါက်တာ Linda Hatch ၏ဤဝေဖန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ The Sunday Times - စကော့တလန်ထုတ်ဝေမှု၊ သြဂုတ် ၂၁ ရက် ၂၀၁၆
စကော့တလန်ပြင်ပမှာအသုံးပြုတဲ့ version ကိုအွန်လိုင်းမြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင်အခမဲ့ပုံပြင် ၂ ခုအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းမှာစာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းခေါင်းစဉ်အောက်ရှိဤခရိုအေးရှားဘာသာစကားသတင်းတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည် nasilnom seksu ဏNAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 godina ovisna su Ana Muhar ကရေးသား။
စကော့တလန် Daily Daily Mail ကတိုင်းမ်သတင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါဖော်ပြခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာကအောက်ပါအပိုင်းအစကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ...
နောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်တွင် Reward Foundation ၏အတွေးအခေါ်များစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါမြို့တော်ရဲ့အရှိဆုံးသီးသန့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများထဲကတစ်ခုမှာကျောင်းသားများစွဲစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေ "porn အသိအမြင်" အတန်းကိုလက်ခံရရှိရန်သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ယင်း၏ကျောင်းသားဟောင်းများအကြားကယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိုနီဘလဲရေတွက်ထားတဲ့ Fettes ကောလိပ်, ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံရန်အင်တာနက်ကျွမ်းကျင်သူကိုဖိတ်ကြားထားသည်။
မာရိကရှပ်, အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးနှင့်ရှေ့နေကိုတည်ထောင်သူ, ကျန်းမာဆက်ဆံရေးကိုအားပေးအားမြှောက်မယ့်ချစ်ခြင်း, ပြီးသားဂျော့ခ်ျ Heriot နှင့် Stirling အတွက်ဒေါ်လာအကယ်ဒမီမှာညစ်ညမ်းအသိအမြင်အတန်းပေးထားတယျ။
အဆိုပါကျောင်းများ၏တဦးတည်းနှင့်နီးစပ်သူတအဆိုပါအစည်းအဝေးများအခြားအရင်းအမြစ် "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်တန်ဖိုးရှိသော" အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြအတူညစ်ညမ်းစွဲ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. "ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်" ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
£ 32,200 ၏အဖိုးအခမှာတစ်နှစ်ပညတ်ထားတဲ့ - - ကချမှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်အနည်းလမ်းကို Fettes နိုင်အောင်အသုံးဝင်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။
ရှပ်သူမကဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းအတန်းကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ "ဒီကျောင်းထိခိုက်သက်ရောက်မှုခက်ခဲ-Core ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားအပေါ်ရှိသည်နိုင်သဘောပေါက်," ရှပ်ကဆက်ပြောသည်။
သူမရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာသူတို့ရဲ့စွဲလမ်း၏ debilitating အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြောပြီကြသူပြည်ပဗြိတိန်နှင့်ထံမှလုလင်ဖြစ်ပွားမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသေးစိတ်ပြုစုခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေဆင်တူ, ရှပ် porn စွဲ '' သည်းခံစိတ်အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတိုးမြှင့်နှင့်သူတို့၏အလေ့အထသည်အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုကျေနပ်ဖို့ ပို. ပို. ဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းရှာကြံအတူမြင့်လာနိုင်သည်ကြောင်းကိုသတိပေးလိုက်သည်။
"လူငယ်ယောက်ျားလျင်မြန်စွာကြောင့်ထိတ်လန့်အချက်အဘို့မိမိတို့လိုအပ်ကျေနပ်ဖို့ခဲယဉ်း-Core porn, fetish porn နှင့်မကောင်းသောအကလေးက porn မှပျော့-Core porn ကနေမြင့်လာနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
ကင်မရွန် Wyllie, ဂျော့ခ်ျ Heriot ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးက "ဒါဟာလူငယ်များညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ပေါ်လာကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေကတဆင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏အလားအလာအန္တရာယ်များနှင့်ထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းတကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
"အထောက်အထားကိုအလွယ်တကူစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်သောကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှမကြုံစဖူးထိတွေ့မှု, ကြီးထွားလာသည်လုလင်တို့ကို desensitising နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းရနိုင်ခြင်းသူတို့ကိုထွက်ခွာ၏။ "
ဇွန်လမှာတော့ NHS Lothian porn-သွေးဆောင်ခွန်အားမရှိခြင်း၏အသိပညာပေးရန်၎င်း၏ Chalmers လမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆေးခန်းမှာဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှပ်ခေါ်။
အဆိုပါ Huffington Post ၏ဗြိတိန်လက်မောင်းအောက်ပါ posted အကွောငျးအရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှစာဖတ်သူတစ် ဦး ထံမှမှတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
အဆိုပါလွတ်လပ်သောရရှိနိုင်သော Sunday Times ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၏, အဓိကအားဖြင့်တစ် Re-run ကိုပြု၏ ဒီမှာ.
ဇာတ်လမ်းကိုလည်းသကဲ့သို့ဝေး, နိုင်ငံတကာမီဒီယာမှာကျယ်ပြန့်ဖွင့်ကောက်ယူခဲ့သည် ဗီယက်နမ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား.
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူတစ် ဦး မှတည်ထောင်ထားသောလှူဒါန်းမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းစာတမ်းတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မာရိကရှပ်၏, non-လေ့ကျင့်အဖွဲ့ဝင် ထောက်ခံသူများဌာနအဆိုပါတည်ထောင်ရန်, left အလေ့အကျင့် ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ, ဦးနှောက်နှင့်မည်သို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်း၏အများပြည်သူနားလည်မှု furthering အားဖြင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာဖို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အဖြစ်၏အကျိုးကို circuitry ၏နောက်ထပ်အများပြည်သူနားလည်မှုရည်ရွယ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို။
အသစ်တစ်ခုကိုစက္ကူများတွင်အားဖြင့် အမေရိကန်ရေတပ် "အမည်ရှိဆရာဝန်များနှင့်ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ"ဒါကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပင်ကျန်းမာကြည့်ရှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများဖန်တီးနိုင်သည့်အားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုယန္တရားများအဆိုပြုထားသည်။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သော့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းမှာစတင်သုံးစွဲသူများသည်အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။
မစ္စရှပ်သူမကလိင်ရာဇဝတ်မှုအတွက်မြင့်တက် "အစိတ်အပိုင်းအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်တိုးခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ရမည်" စခွေငျးငှါထင်ကပြောကြားသည်။
သူမသည်ဆက်ပြောသည်: "အဲဒီမှာရဲကပိုကောင်းထောက်လှမ်းမအဖြစ်သမိုင်းကလေးသည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပိုပြီးလူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကစားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစီရင်ခံရန်ရှေ့ဆက်လာမယ့်မသံသယရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကအောက်, ရှိသမျှ porn စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု desensitisation အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အခြား addiction- မှ related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားရမည်ဖြစ်သည်။
"ဒါကကျနော်တို့ရာဇဝတ်မှု၏ဤဧရိယာ၌မဆိုလျှော့ချရေးကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်လျှင်ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များနှင့် တွဲဖက်. အတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအာဏာပိုင်များအားဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရှိပါတယ်။ " သြဂုတ်လ 22, 2016 ။ ကျောင်းများတိုးတက်မှု
မကြာသေးမီက Tony Blair ၏ကျောင်းဟောင်းသည်ကျောင်းသားများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းသောသတိထားမှုသင်တန်းများပေးလိမ့်မည်ဟုရှေ့နေ Mary Sharpe ကခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သည်။
ယူနိုက်တက်၏ထူးခြားသည့်အများပိုင်ကျောင်းများဖြစ်သော Edinburgh ရှိ Fettes College သည် Reward Foundation ပရဟိတလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ Ms Sharpe အားလာမည့်နှစ်အစတွင်ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
မစ္စရှပ်၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Reward Foundation ဥက္ကand္ဌ Darryl Mead သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆက်ဆံရေးကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့် Belfast Telegraph သို့ပြောကြားရာတွင်မြောက်အိုင်ယာလန်သည်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နေသည်ဟုဘဲလ်ဖတ်တယ်လီဂရပ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Mead က“ မေရီနဲ့ကျွန်တော်ကကျောင်းတွေမှာအတူတကွတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ကြပြီးပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလုပ်ဖို့အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့မှာသီးခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မြောက်အိုင်ယာလန်ကကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစာရင်းမှာပါ ၀ င်ပြီးမူလတန်း၊ အလယ်တန်းနဲ့သဒ္ဒါကျောင်းတွေမှာအတန်းတွေတက်ဖို့အရမ်းပွင့်လင်းတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာမတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုသီးခြားအစည်းအဝေးတွေပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ ၀ မ်းသာပါတယ်။ ”
မစ္စရှပ်ပါက Radio Ulster's Nolan Show ကိုအသက် ၁၆ နှစ်နှင့် ၁၇ နှစ်အရွယ်ကလေးများနှင့်အဓိကထားဆက်ဆံသော်လည်းသူတို့၏မူလတန်းကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ကလေးများအားစတင်ပညာပေးရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ သုတေသနတွေကပြနေတဲ့ပျမ်းမျှကလေးတွေဟာအဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံတွေကိုစပြီးရှာဖွေနေကြတယ်၊ အဲဒီလိုပုံမျိုးတွေဟာ ၁၀ နှစ်ပြည့်တယ်။
"ဒီနေ့အင်တာနက်ကသူတို့ကိုအရာအားလုံးကိုမောက်စ်တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်လက်ချောင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေ ဦး နှောက်ကိုအမြင့်ဆုံးထိတွေ့နိုင်အောင်ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအခုသတိပေးဖို့လိုလာပြီ"
ရှေ့နေက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဝတ်လစ်စလစ်ကိုကြည့်ရုံဖြင့်ထိခိုက်မည်မဟုတ်” ဟုပြောကြားသော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သောပစ္စည်းများအတွက်တံခါးပေါက်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒါကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ဦး နှောက်ဟာတစ်ခုခုနဲ့ငြီးငွေ့လာပြီးအသစ်အဆန်းလိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့အလွန်လွယ်ကူတယ်။ ကလေးတွေကိုဒီကိစ္စကနှိုးဆွပေးတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ကမှားယွင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုလေ့လာနေတာကြောင့်သူတို့ကပျက်စီးစေတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့ ADHD (အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ) ရုံနှစျခုမစ္စရှပ်ညစ်ညမ်းဆက်စပ်သည့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖြင့်ပြီးကြ၏။
သူမသည်အသက် ၂၀ အရွယ်ယောက်ျားများအကြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြgrowingနာကြီးထွားလာခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီး“ သူတို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်” ပါ။
"သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွေကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်သွားစေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာနှိုးဆွနိုင်တဲ့နှိုးဆွမှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။
DUP MLA နယ်လ်ဆင်မက်ကက်စ်လန်းသည်ဒေသခံကလေးငယ်များအားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း၊ လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပညာပေးသင့်သည်ဟုဆိုသည်။
“ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဆိုးသွမ်းမှုသဘာဝနဲ့လူ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံတွေကိုဒီကနေ့သတိပြုမိလာတယ်။ လူငယ်များကိုပိုမိုကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ထိုအန္တရာယ်များကိုသတိပြုမိစေရန်မည်သည့်အရာကမဆိုကောင်းပါတယ်။